MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA STAFFORDSHIRE BULL TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Staffordshire Bull Terrier Dog
Broxi oo jira 8 bilood-waa buluug Staffordshire Bull Terrier, KC ayaa diiwaangashan. Waa eey dabeecad weyn, aad u saaxiibtinimo badan, oo aad ugu wanaagsan iskuulka adeecida. Lahaanshaha sawirka SKEG
Liistada Eyda Staffordshire Bull Terrier Mix Breed
Ingiriisiga Staffordshire Bull Terrier
STA-fuhrd-xishood-ur bull TAIR-ee-uhr
'Staffordshire Bull Terrier' waa eey murqaha leh, aadna ugu xoogan cabirkiisa. Madaxa waa mid gaaban oo qoto dheer leh qalfoof ballaaran, wejiga hore, joogsi gooni ah iyo daaman xoog leh. Sanku waa madowyahay. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Dibnaha waa inay ahaadaan kuwo adag oo nadiif ah. Indhaha wareega ayaa midabkoodu mugdi yahay, marka loo eego jaakadda. Dhagaha waxoogaa yar ama sare ayey u kacday ama badh baa wax lagu muday. Lugaha hore waa toosan yihiin. Mararka qaarkood waxaa la saaraa calaacalaha oo cagaha waa kuwo dhexdhexaad ah oo si wanaagsan loo duubay. Dabada hoose ee hoose ayaa ka dhumuc weyn salka, hoosna ugu soo dhacaya dhibic yar yarna xambaarsan. Dabada waa inaysan inbadan duubmin oo waxaa loo ekeysiin karaa mashiinkii bamka ee gaboobay. Koodhka jilicsan, gaaban wuxuu ku yimaadaa casaan, fawn, caddaan, madow ama buluug, ama midabbadaas midab leh oo cad iyo meel kasta oo baal madow leh ama aan lahayn calaamado cad.
sarkaal oo dahab ah iyo isku dhafka yorkie
The Staffordshire Bull Terrier wuxuu sameeyaa wax kasta oo gaaska buuxa ah: ciyaar, shaqo iyo jacayl. Waa mid geesinimo iyo adeec badan, kalgacal leh dareen kaftan ah. Mid ka mid ah milkiilaha kooxdan ayaa leh, 'Staffordshire Bull Terriers waa dad aad u saaxiibtinimo badan. Si gaar ah ugama feejignaadaan shisheeyaha duruuf kasta oo jirta — in kasta oo aan maqlay dhowr sheeko oo kusaabsan qaar ka taxaddar dad gaar ah. Eeyadaydu had iyo jeer way ku faraxsan yihiin la kulanka dad cusub! Sumcadda caanka ah ee carruurtu waa midda labaad. Ku caabuday kuna caabuday gudaha qoyskeeda. Badanaa way ku fiican tahay xayawaannada kale ee guriga ku jira, laakiin la'aan adag, hogaamiyaha baakadka bani'aadamka oo bixiya sixitaanka waqtiga ku habboon markii loo baahdo, waxaa laga yaabaa inay la dagaallanto eeyaha ka baxsan qoyska. Si wanaagsan u dhexgeli iyaga . Noocani waa mid caqli badan, joogto ah oo firfircoon. Ma ahan dabaal wanaagsan. Ey eey ahaan waxay u egtahay inay wax badan calaliyaan sidaa darteed hubi inaad siiso iyaga waxyaabo badan oo caruusadda lagu calaliyo ah. Daamankooda awoodda badan ayaa jeexjeexi doona in kasta oo alaabada ay ku ciyaaraan vinyl-ku ay ku gaadhaan squeaker-ka waqti aan badnayn. Tani waxay noqon kartaa khatar haddii eeygu liqo caagga. Hubso inaad kaliya siiso Shaqaalahaaga qalab ay ku ciyaaraan oo adag. Ha u oggolaan in eeyo yaryar ay ku calaacashaan gacmaha dadka. Ha u ogolaan eeygaaga inuu ka xirmo xadhigiisa ilaa uu ka badbaado mooyee. Waxaa loo tababbari karaa dhaq-dhaqaaqa iyo u hoggaansamida tartanka. Noocani wuxuu ku tartamaa kacdoonka iyo adeecida Boqortooyada Midowday ee heerka ugu sareysa. Shaqaalahu waxay jecel yihiin tartan iyo noocyo kala duwan. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay ka ilaaliyaan eeyahaas inay is dhaawacaan. Gabi ahaanba cabsi la'aan iyo xiiso leh, waxay ku qasban yihiin inay ka boodaan meel sare ama ay maraan muraayad jaban. Way adkaan karaan in guriga la jajabiyo. Eeyadan laguma taliyo qoysaska badankood, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin xubin kasta oo ka tirsan qoyskooda inuu noqdo mid adag, kalsooni leh, hogaamiye xirmo joogto ah , iyagoo siinaya sharciyo ay tahay inay raacaan isla markaana xad u yeelaan waxay sameyn karaan iyo wixii aysan sameyn karin. La'aanteed, waxay noqon doonaan madax adag iyo adag tahay in la maareeyo . Ujeedada tababarka eeygan waa in gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
Dhererka: Ragga 14 - 16 inji (36 - 41cm) Dumarka 13 - 15 inji (33 - 38 cm)
Miisaanka: Ragga 25 - 38 rodol (11 - 17 kg) Dumarka 23 - 35 rodol (10 - 16 kg)
U nuglaanta indho fiiqista, HC iyo PHPV (labadaba cabashooyinka indhaha), in kasta oo baaritaanka labada waalidba laga hortagi karo. Shaqada DNA-da ee Boqortooyada Midowday (UK) waxay ku dhowdahay inay dhameystirto si loo daaweeyo tan (dadku waa inay hubiyaan inay wax ka iibsadaan waalidiinta indhaha la baaray, iyo in eeyaha la baaro asbuucyo yar). Hip dysplasia marmar ayaa la arkaa. U janjeera burooyinka unugyada . Eydu waxay u nugul yihiin inay yeeshaan jilicsan oo jilicsan. Sida dhammaan noocyada noocyada cagajuglaynta, Staffordshire Bull Terriers waxay badiyaa leeyihiin dhibaatooyin gaas ah.
Staffordshire Bull Terrier wuxuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha dhexdiisa wuxuuna ku fiicnaan doonaa daarad yar.
Staffordshire Bull Terrier wuxuu leeyahay awood aad u weyn waana inuu leeyahay jimicsi fara badan, oo u baahan in lagu daro maalin kasta soco ama orod.
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Ku caday maalin kasta burush adag, oo maydh ama shaambo qallaji hadba sida loogu baahdo. Koodhku wuu dhalaali doonaa haddii lagu xoqo gabal tuwaal ama jajab.
The Staffordshire Bull Terrier waxaa laga soo saaray gobolka Staffordshire, England, qarnigii sagaal iyo tobnaad iskutallaabtii udhaxaysay Bulldogs iyo noocyo kala duwan oo maxali ah oo la mid ah Manchester Terrier . 'Staffordshire Bull' waxaa loo sameeyay isboorti markaas caan ka ahaa dibin daabyada. Caannimada caannimadu way yaraatay markii xiisihii isboorti yaraadeen. Kadib, qarnigii labaatanaad, xiisaha taranka ayaa mar kale koray, gaar ahaan Mareykanka. Waxay ku soo noqotay giraanta show-ka 1935. Mareykanka gudihiisa hadda waxaa si wanaagsan loogu kariyay cabbir waxoogaa ka weyn kan loogu yeero heerka Yurub. 'Staffordshire Bull Terrier' eey uma eeka qoys kasta, laakiin wuxuu ku jiraa gacanta a xukuma , milkiil khibrad leh waxay noqon kartaa xayawaan guuleysta iyo ilaaliyaha qoyska. Nooca waxaa aqoonsaday AKC 1975.
Ku dheji Staffordshire Bull Terrier eey qiyaastii 2½ bilood jir ah
Cinnamon the Staffordshire Bull Terrier oo ah eey yar markay jiraan 4 bilood
Bossy Ingiriisiga Staffordshire Bull Terrier oo 2 jir ah kana yimid Australia
Shaashadda timo cad leh ee wejiga hore waa Tedi, dhanka midigna waa Nitro, aabbe Taw oo ah aabbe shaqaale leh.
Oscar the Staffordshire Bull Terrier 4 bilood jir
Cali Cali Staffordshire Bull Terrier eey yar oo 4 bilood jir ah— 'Cali waa nin faraxsan oo aad u sarreysa Staffordshire Bull Terrier oo jecel inuu ciyaaro dheelsi oo uu socod dheer ku maro galabta.'
Tyra Ingiriisiga Staffordshire Bull Terrier oo 2 jir ah
Staffordshire Bull Terrier pup wuxuu ka diiwaangashan yahay 'Had iyo jeer Samson Doono' oo ka tirsan The Kennel Club UK, oo uu leeyahay Steve Lewis
adhijirka jarmalka isku dhafka ah eeyo yaryar
Staffordshire Bull Terrier qof weyn ayaa ka diiwaangashan 'Markasta La Doonayo Samson' oo ka tirsan The Kennel Club UK, oo uu leeyahay Steve Lewis
Eric Thunderpaws oo ah kii 2aad ee 'Staffordshire Bull Terrier' oo jira 12 sano kuna fadhiya fadhiga fadhiga— Wuxuu ahaa mid caqli badan, naxariis badan oo naxariis badan oo uu jecel yahay qof kasta oo waligii la kulmay. Waxaan ka helay xarunta badbaadada markii uu 18 bilood jiray oo uu la kulmay xadgudub aad u xun, wuxuu had iyo jeer umuuqdaa mid aad u mahadsan.
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Staffordshire Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier Sawirro 1
Staffordshire Bull Terrier Sawirada 2
Staffordshire Bull Terrier Sawirada 3
Staffordshire Bull Terrier Sawirada 4
garka Japan iyo isku dhafka Malta
feeryahan iyo isku dhafka collie xuduuda
dhammaan tilmaanta gaagaaban ee jarmalka jarmalka ah
soohdinta collie shukulaatada isku darka ah
Isbaanishka cavalier king charles mix